Nkume Italian eke eke na-acha ọcha arabescato marble nwere veins isi awọ
Nkume Italian eke eke na-acha ọcha arabescato marble nwere veins isi awọ
Marble Arabescato nwere okirikiri na-acha ọcha nke nwere ụkpụrụ isi awọ gbara ọchịchịrị, ọ bụ ezie na veins dị obere karịa na marble calacatta mana buru ibu karịa na marble carrara.
Ala ma ọ bụ mgbidi ịchọ mma, countertop, ihe efu n'elu, wdg.
Marble Arabescato nwere okirikiri na-acha ọcha nke nwere ụkpụrụ isi awọ gbara ọchịchịrị, ọ bụ ezie na veins dị obere karịa na marble calacatta mana buru ibu karịa na marble carrara.Marble ọcha Arabescato bụ akụkụ nke ezinụlọ marble ọcha carrara.Ọ bụ kristal, marble ọcha translucent nwere eriri isi awọ na ojii nke a na-ewere nke ọma n'ụwa niile.A na-eji mabụl a chọọ ụlọ, arịa ụlọ, na ihe ọkụ mma.
Arabescato corchia marble na-ejikọta ịma mma Ịtali na mgbanwe nke oge a.Ọ dị mma maka iji na kichin, ụlọ ịsa ahụ, ala, na mgbidi.
Agba nke oge gboo nke arabescato corchia skined marble na kichin a haziri na-enye ụdị na agwa na-adịghị agafe agafe.E kwesịghị iji agba marble ọcha Arabescato mee ihe n'ọnọdụ ebe a ga-ekpuchi elu ya na ọtụtụ uwe na kọntaktị.
Ihe kachasị ngwaahịa: marble eke, granite, onyx, agate, quartzite, travertine, slate, nkume wuruwuru na ihe ndị ọzọ sitere na nkume.
Nke gara aga: Bathroom mgbidi n'ala tiles Greece ọcha volakas marble maka ịchọ mma
Osote: Taịlị marble na-acha ọcha ndị China na-egbu maramara maka ala mgbidi
N'ogbe marquina Tunisia nero st laurent saha...
eke ọcha ọla edo fusion ọla edo aja aja mabul f...
okomoko ọcha mma ice jade green marble maka i...
Factory price polished ọhụrụ ice green marble sla ...
Aluminom marble nkume ebuanu mejupụtara panel ...
Eke polishing n'ala taịlị ọcha osisi marb...
Ihe nrịbama granite na-acha anụnụ anụnụ, Gray Granite, Taịlị mgbidi Marble ọcha, Granite odo odo, Gray Gray dị ọkụ, Black Granite,